Infrastructure | February 2020
Wixii waraabinta dhirta gadaashiisa, biyaha laga bilaabo ceelasha ugu dhow, tiirarka, iyo kaydadka dabiiciga ah ayaa inta badan la isticmaalaa, iyagoo rakibay bamka la soo gudbiyo haddii loo baahdo. Hase yeeshee, haddii aysan aqallada ku xirnayn nidaamka biyaha ee dhexdhexaadka ah, markaa waa lagama maarmaan in la xalliyo arrinka biyaha ee dhismaha. Markaa milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay baaraan su'aasha ah sida loo doorto xarun bamgareyneysa guri gaar loo leeyahay.
Sida loo sameeyo xayndaab sariiraha leh gacmahooda
Iyada oo la ixtiraamo xitaa dhul yar oo dhul ah, waxaan rabaa in aan ku beero waxyaabo ku dul mari doona miro ama uun uun isha ku hay. Laakiin marar badan bannaanka iyo bannaanka u ma ka fikiraan wax badan oo ku saabsan design of sariiraha. Taasna waa sababta deyrka sariiraha looga samaysan yahay qalab aan habooneyn waxayna u muuqdaan kuwo aan la qabin.
Dhammaan wax ku saabsan miro-dhejiyaha xayawaanka
Gaadiidka, tareenada yaryar iyo kuwa yaryar ayaa ka caawiya noloshooda inay u fududeeyaan beeralayda oo dhan: laga bilaabo beeraha yaryar ilaa hanti beereed awood leh. Faa'iidada ugu weyn ee cagaf-qaadaha waa suurtagalnimada isticmaalka qalabka la isku-duubay oo ku xiran shaqooyinka kala duwan. Tusaale ahaan, for engagement ama si aad u diyaargariso beeraha loogu beerayo isticmaalka noocyada kala duwan ee mowers.
Xitaa haddii aad amar ku siisid goobtaada, waxaad mar walba hagaajin kartaa waxna ka dhigi kartaa. Ka dib oo dhan, walxaha qurxinta ayaa ku haboon ma aha oo kaliya in dhismaha, laakiin sidoo kale beerta. Waxaa suurtagal ah in lagu qurxiyo ubaxyo, sariiraha iyo meelaha ku wareegsan geedaha, tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo dayrarka. Noocyo kala duwan oo caag ah oo caag ah ayaa si isku dheelitiran u buuxiya gudaha gudaha goobtaada waxayna kaa caawinayaan nidaamyada dhirta, si loo xaqiijiyo koritaankooda haboon iyo xitaa jiilaalka.
Markii hore, eeyaha ku noolaa deyrka, waxay dhiseen kabaha waxayna ku xidhxidheen silsilad. Maanta, sii kordhaya si ay u dhisto dhismaha meelo waaweyn. Dhinaca kale, eeygu ma heli karo meydka martida ee soo galaya barxadda, dhanka kalena, qoorta mar dambe qoorta iskuma dhicin, oo ilaaliyaha aaminka ahi wuxuu u gudbi karaa dhererkiisa.
Dadka degaanka xagaaga, kuwaas oo doonaya in ay beeraan khudaarta mustaqbalka oo ay sameeyaan ilaalin, had iyo jeer waxay la kulmaan dhibaatada haysashada kaydinta muddada fog. Iyadoo aan lahayn maqaasi halkan kuma filna. Si kastaba ha noqotee, qof walbaa ma haysto wakhti iyo karti u leh in uu iskood u dhiso, oo aad u baahan tahay inaad gashid caawimada khabiirada. Dhawaan, diyaar garowga-diyaarinta ee caagaga xagaaga ayaa si caan ah u caan ah.
Badanaa, mulkiilayaasha cusubi waxay la kulmaan dhibaatada kaamil la'aanta ah: dhoobo, qulqulo, godad, iyo wixii la mid ah. Dad badan ayaa u maleynaya in ay qaadan doonto dadaallo badan iyo maalgelin maaliyadeed si ay u xalliyaan xaaladda. Qodobkani waxaan ku ogaan doonnaa sida loo qiyaaso qorshaha dalka iyaga oo gacmahooda ku hoos jira cawska ama hoosta beerta, sida ay u adag tahay ama u sahlan tahay in la sameeyo.
Guri gaar ah ama waddanka, badanaa waxay dhistaan ​​kaydka macmalka. Dabcan, xaaladdan ma samayn kartid dhaqamo aan qurux badneyn oo dhismaha ah. Qodobkan waxaan ku tilmaameyn karnaa dhirta aquatic inay ku habboon yihiin balliyada iyo jirooyinka kale ee biyaha, sida loo abuuro iyo daryeelka iyaga. Doorka dhirta ku yaal balliinka Shaki la'aan, dhaqamada sii kordhaya balliiga ayaa ka dhigaya mid aad u qurux badan, asal ah oo nool.
Sariiraha kulul leh gacmahooda
Mid ka mid ah arrimaha saameynaya bilowga beeridda, iyo sidoo kale koritaanka iyo horumarinta dhirta la beeray, waa heerkulka dhulka furan. Muddo hal xilli ah, seddex ama xitaa afar dherer sare leh dalagyada beerta kala duwan ee hal meel ayaa laga heli karaa sariiro diiran, kuwaas oo si fudud loo xallin karo gacmahaaga.
Xayndaab alwaax ah waa fikrad fiican guriga guryaha ama xagaaga xagaaga. Qalabkani wuxuu xaq u siinayaa guriga. Aan fiirino sida loo diyaariyo maaddada dabaasha iyo sida loo soo ururiyo. Hoose, dhexdhexaad ah ama sare? Sida caadiga ah, dayrka wickers ayaa loo qaybiyaa dhowr nooc oo ku xiran ujeedada.
Sida loo sameeyo hawo qaboojiyaha
Marar badan, waxaan la kulannay arrinka kaydinta jiilaalka ee khudradda iyo waxyaabaha kale. Meelaha ugu fiican waa maqaasiinka, si kastaba ha noqotee, si alaabadu u socoto muddo dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo hawo-qaadid wax ku ool ah. Maqaalka waxaan ku sheegi doonaa sida loo sameeyo moodada Maqsin. Sidee u shaqeysaa?
Cunto joogta ah iyo kuwa guur guura ee lo'da
Sannad kasta tirada qalabka loo isticmaalo beeralayda ganacsigooda waxay kordhayaan. Gawaarida iyo farsameynta foosha ee ku saabsan beeraha waxay fududeeyaa foosha, waxay ka dhigtaa shuruudaha xayawaanka si wanaagsan uguna yareyneysa qiimaha wax soo-saarka. Qalabkaas waxaa ka mid ah bixiyeyaasha quudinta.
Isku dar "Niva" SC-5: dib-u-eegis, dabeecado, khibrad iyo garasho
Noocyada ugu guulaha badan ee baabuurta wakhti ka dib waxay noqdaan kuwo u baxda halyeeyada oo ay noqdaan nooc calaamado ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa si guul leh u shaqeynaya wali waa la soo saaraa. Mid ka mid ah "kuwan" muddooyinka dheeraadka ah "waxaan ka fiirsanaynaa dib u eegista. Waxaynu baranaynaa waxa cajiib ah ee ku saabsan qalabka 'legendary' ee isku dhafan "Niva SK-5".
Mabaadii'da dabiiciga ah ee saameynta
Cimilada jardiinooyinka intooda badani isbeddel maayaan sanadaha - dalag kasta wuxuu leeyahay meelo gaar ah, taas oo aan dhaqdhaqaaqi karin. Tiknoolojiyada beeraha noocan oo kale ah waxay keenaysaa wax-soo-saarka xasilloon, laakiin ma tixgelinayo xaqiiqda ah in halabuurka ciidda ay isbeddeli karaan, iyo dhirta waa in la beddelo, iyaga oo ku dhejinaya "bam".
Sidee loo sameeyaa xayndaabyada gabyaada adiga ayaa sameeya
Ilaa hadda, waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo loo isticmaali karo dhismaha qaabab kala duwan sida dayrarka. Marka aad dooranayso mid ama qaab kale, inta badan waxay ku hagaan xaqiiqda ah in ay ahayd mid xoogan oo u adeegta in ka badan hal sano. Arrin isku mid ah oo muhiim ah waa midda iyo muuqaalka xayndaabka xayndaabka.
Sidee loo sameeyaa gacmo furan oo guriga lagu dhejiyo
Qaar badan ayaa ku jira xayawaan aad u wanaagsan oo xoolaha ah. Xaaladahaas oo kale, waxaa jira dhibaatooyin ba'an oo ka yimaada raashinka quudinta - cunto yaryar oo loogu talagalay "qaybaha" waa mid aad u badan, iyo quudinta ayaa la diyaariyaa marar badan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad sidoo kale u baahan tahay qalab, iyo naqshadaynta warshaduhu wax badan ayay ku kacaan. Laakiin xalku weli wuu joogaa - si aad u soo qaadatid xargaha dheeraadka ah ee gacmahaaga.
Cimilada gobolladeenu waa sida meelo badan oo ka mid ah dhulka oo dhan ay maamusho ilaa wakhtiga beerto geedo dhul furan. Gurye-dhireedku wuxuu yimaadaa gargaarka beeraleyda, laakiin waxaa jira shuruudo heerkulleed xitaa xitaa dhulka aqalka dhirta lagu koriyo. Si loo dedejiyo habka kululaynta dhulka lagu koriyo polycarbonate iyo si loo ilaaliyo geedaha ka yimaada isbadal heerkul aad u daran, waxaa habboon in lagu qalabeeyo sariirta diirran xilliga dayrta.
Sida loo sameeyo walxaha gacmahaaga
Way adag tahay in la qiyaaso naftaada oo aan soo booqday kebab ugu yaraan dhowr jeer inta lagu jiro xilli. Badanaa, khidmadaha dabiiciga ah way dhib badan yihiin maqnaanshaha dabeecadda ugu weyn - brazier, taas oo ka dhigaysa xakamayntan sidaas xitaa waxoogaa yar. Ugu dambeyntiina, waxaad go'aansataa inaad sameysid gacantaada gacmaheeda boggaaga, laakiin ma ogid qofkuu dooranayo iyo halka laga bilaabo.
Kruporushka (rushka) ee hadhuudhka ayaa iska leh
Corn waa mid aad muhiim u ah sida mid ka mid ah cuntooyinka muhiimka ah ee dadka iyo xayawaanka, iyada oo ay ugu wacan tahay content sare ee nafaqooyinka. Marka ay sii kordheyso cuntada, waa lagama maarmaan in la kala sooco miraha ka soo baxa ubaha. Hannaankani waa mid dhib badan. Sidaa darteed, si aad u sahlanaato, waxaad samayn kartaa kabo goosan khaas ah oo gacmahaaga ah.
Qolka sariirta: sidaad adigu u samaysan lahayd adhigaaga?
Xidhiidhka ilmanaha idaha waa arrimo la xiriira habka jiilaalka ee lo'da. Ururkan habboon wuxuu leeyahay tiro muuqaal ah. Qolka oo dhan oo shuruudaha lagama maarmaanka u ah ilaalinta idaha ayaa la abuuri doonaa marka loo eego dhismahooga caadiga ah. Qodobkani waxaan ku sharrixi doonaa sida loo sameeyo ido-eyga - guri raaxo leh nooca xoolaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Infrastructure 2020